Bakka kanatti, akkaataalee otoolaaf haaloota qindeessa.
Akaataawwan otoolaa, akkaataawwan keewwata warra haalqara irratti huundaa'uun amaloowwan adda addaa qabanii dha. Erga aaltokko qinda'ee, amalawwan otoolaa kan akkaataa otoolaa jijjiiruu hindandeessu.
LibreOffice amalawwan keewwata kan akkaataawwan otoolaa kanaan gaddii fayyadama (jechawwan yabbuu matadureewwan kan dirreewwan qaaqa): Yoo keewwatii tokko akkaataa otoolaan Context that has an Akkaataa Fayyadamaa keessatti dhangeefame, kana booda otoola sana irra Akkaataa Keewwata fayyadama. Yoo Halqara itti akkaataa hinkoronyate, amalawwan akkaataa otoolaa keessatti qinda'ee fayyadama. Fakkeenyootii kanaan gaddii firoomina kana ibsa:
Kana booda, caancala Condition cuqaasi, Akkaataa Keewwataa haaraa akka akkaataa otoolatti qindeessuuf, dirree Akkaataa otoola fili.
Halqara keessaa, galfata irraantoo fili, Akkaataawwan Keewwataa jalatti ammoo, irraantoo xalayyaa bunaqaa kee keessaatiif akkaataa fili; fakkeenyaaf, durtiin "Irraantoo" Akkaataa Keewwataa. Akkasuumas akkaataa kee filuu nidandeessa.
Halqaratti Akkaataawwan Keewwataa galfata filatame sanduuqa tarree Akkaataawwan Keewwataa keessa lama-cuqaasuun, yk Fayyadami fayyadamuun hojjii irra olchuu nidandeessa.
Qaaqa Akkaataa Keewwata cufuudhaaf, OK cuqaasi, kana booda keewwatoota mara xalayyaa bunaqaa kee keessaa, irraantoo dabalatte "Xalayyaa Bunaqaa" isa haaraa Akkaataa Keewwataa otoolaa waliin dhangeesi. (Yammuu irraantoo keessa cuqaastuu, Akkaataawwan Mara agarsiissuu qabaachuu sirra jira, yk tarree akkaataa keessaa Akkaataawwan Maamiloo akkaataa xalayyaa bunaqaa haaraa fayyadamuu qabda.
Barruun irraantoo amma amalawwan isa ati Akkaataa Keewwata Irraantoo keessatti ifteessitte qaba, kutaan galmee kabiroo ammoo, amalawwan xalayyaa bunaqaa Akkaataa Keewwata otoolaa keessatti qinda'ee qaba.
Halqaratti Akkaataa Keewwataa kan fayyaduu yammuu dhangiiwwan ka biroo (RTF, HTML, k.k.f) alergduudha.
Akka akkaataa otoola tokkootti akkaataa haaraa tokko qindeessuuf, sanduuqa kana mirkaneesi.
Bakka kanatti, halqarichaaf tarree kan Akkaataawwan Keewwata mara fayyadamaa argu nidandeessa.
Halqarichatti tarreen kan Akkaataawwan Keewwata maraa wari ramadamuu danda'aan sanduuqa tarree keessatti walitti qabamu.
Akkaataa filatameef halqara ammaa ramadame haquu yoo barbadde iddoo kana cuqaasi.
Title is: Haala